Tikniyoolajiyadda, dabcan, waa qaab lagu dejiyo tan. Taas macnaheedu maaha in dadka iyo geeddi-socodka aysan macno lahayn, waxay kaliya ka dhigan tahay in maalgelin siinta qiimaha macaamiishaadu ugu dambeyntii ay tahay maalgelin lagu sameeyo aragtidaada astaantaada.
Lagu horumariyey iskaashi lala yeesho hay'ad isku dhafan oo isku dhafan iyo hay'ad warbaahineed 360i, iyo la-hawlgalayaasha tikniyoolajiyadda Shaybaarada Qaxwada Kroger's Chefbot wuxuu bixiyaa xal wada hadal saaxiibtinimo leh oo loogu talagalay ka go'ida howlaha waqtiga caadiga ah ee cuntada iyo qashinka cuntada guriga-aan loo baahnayn — caqabadaha guud ee badan ee qoysaska sii wadaya inay ku raaxaystaan ​​cunno badan gurigooda.
Isticmaalka Cadaynta, Chefbot's AI wuxuu falanqeeyaa sawirada si loo aqoonsado ku dhowaad 2,000 oo maaddooyin ah, oo laga furayo 20,000 cuntada Kroger ee loogu talagalay dadka isticmaala inay karsadaan.
Khibradda Chefbot waxaa ka mid ah baraha taabashada badan, oo bixiya kaqeybgal bulsho oo xiiso leh iyada oo loo marayo Twitter oo lagu lifaaqay Kroger.com is dhex galka ganacsiga e-commerce. Waqti ka dib fikradaha la bartay, Aqoonsiga cuntada ee Chefbot iyo tikniyoolajiyada raadinta cuntada ayaa horumarin doonta oo hagaajin doonta, taas oo u oggolaanaysa fursadaha qalabkan xoogga leh in lagu hormaro.
Waxay u shaqeysaa sifiican! Dabcan, waxaan isku dayay inaan ku tuuro kubad curlo ah oo ay kujiraan maaddooyin yaab leh markii ugu horeysay… taas oo aan cadaalad aheyn! Tijaabadii labaad ee aan sameeyay, miiska waxaan saaray boorso digaag la qaboojiyay iyo medley la qaboojiyay oo aan diray.
Natiijadu waxay ahayd xoogaa fiican fikradaha karinta! Haddii aad nitpicking tahay… waxaad u badan tahay inaad tiraahdo farsamo ahaan ma ahayn broccoli oo aan kiish ku haysto. Run… oo waxaan la yaabanahay haddii, taa beddelkeeda, Kroger uu isticmaali karo aqoonsi dabeecadeed marka lagu daro aqoonsi muuqaal si uu uga gudbo maaddooyinka leh alaabada dhabta ah ee ku jiri kara cuntada.